भारतीय एक सिरियलमा नेपाली शब्द जोडेर निकै तुच्छ गाली दिइएको छ ।
अमेजन प्राइम सिरिजमा प्रसारण भइरहेको यो सिरियलको पहिलो सिजनको दोस्रो एपिसोडको ३ मिनेट ४१ औं सेकेन्डमा महिला पुलिसकर्मीले एक युवतीमाथि कुटपिट गर्दै भन्छिन्, ‘साथी हुन् कि ग्राहक हुन् ? धन्धा गर्छेस् ? नेपाली रण्*’
‘पाताललोकको यो दृश्यले यहाँ साम्प्रदायिक वैमनस्यता निम्त्याएको छ जुन नेपाल र मेरो पूर्वोत्तर समुदायका लागि पूर्ण रुपमा जातीवाद हो ।’ ‘माफी माग र यो दृश्य हटाउ,’ उनले अन्तिममा लेखेका छन् । यसका साथै, रक गायिक अभया सुब्बाले पनि प्रलक्षको यो पोष्ट सेयर गर्दै यसमा उल्लेख गरिएको शब्दले पूरा समुदायको अपमान गरेको भन्दै अनुष्का शर्माबाट माफीको माग गरेकी छिन् । उनको र प्रलक्षको पोष्टमा थुप्रैले यस्ता शब्द कुनै पनि हालतमा सह्य नभएको भन्दै यसले भारतीयको नेपालीप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने बताएका छन् ।